Jeeqama ABO muddatee fi madda isaa – Welcome to bilisummaa
bilisummaa May 29, 2015	2 Comments
ABO fi qabsoon bilisummaa Oromoo jeeqama keessa turuunii fi jiraatuun waan haalamamuu miti. Jeqamni kun, dhokataa miti; ifaa dha; ija keenya dura jira. Akkuma Oromoon yoo makmaaku ijji hin argitu, qalbii dha jedhu, jeeqama kana fi madda isaa qalbiin hubatuun barbaachisaa dha.
Guutuu waa’ee kanaa dubbisuuf as xuqaa
Tags Abo bilisummaa
Previous Afoola Oromoo: Hibboo fii makmaaksa (kutaa Sadaffaa 300)
Next Kabaja waggaa 1ffaa OMN magaalaa Jiddaa
anii kan naa dhibee kuni ABO bakkaa lammaati addaan bahu issaa abbaa motumaa irree dhaafi akkaa yerrroo irrumaa issaa dheeresa jiru taha garru bilchaana samuu issani hagaam akkaa tahe aggaarisaa !! iddoo tokko tahaani qofaa ibsaa wali iraati basssuni kuni akkaam akkaa naagaadissuu ibsu hin daandaahu garu kan biyyaa kessaa walumagaalati ABO jedhaani motumaani abbaa irree haachuuchaa jiraa kessatu,barattaa, qeerooo, qottee bulaa lafaa samuun, kkf ammaasi guyyaa tokkoo baari daaribu hin oltu seenaan siin gaafati jedhaa. Qaabissoon biyyaa kessaa kessumaatu kan qerron gaagessa jiruu baayee nagaamachisee, issiin waari waliqoddaani maqqaa oromottin daldaaltaani seenaa siin yaa gaafaatu jedhaa! dinnaafi garuu gaamachu guddaa dha. mee hubadhaa kan maaqqaa ummataa oromotiin waayaaneen ni daaldaala jiraa kani baarateesi kan siyyaasa beekkaa jedhuus, kan raayyaa kessaa jiruus, meeqqaa oromottin daaldala jira, garu kan warreggaama jiru qerroo , baarattaa kkf dha, boru siin gafachuu kenyaa hin olluu , naa jeebadhuu yaa qeerroo biyaa oromia kessaa jrtu marti!!!
Kana hundaa kan xabaaqultu kun Da`udii fi Bultumiin balaaleffachuf? .Looltuu Lichoon fudhatee galees balleesaa SG gootee? Ati ni dhageese malee wa`ee ABO hin beektu! Bareefama kee irra atti warra daba kana dalagu keesas jirtu tokko fakkaata.Waan heedu kijjiba dhugaa fakkeesitee uumata wal dha`uuf yaalta. Yaaliin akkas kun yeroo heedduu waan fashaleef kan kee kuniis carraan isaa kana ala hin ta`u.